सलमानको ‘राधे’: स्टारडमको नाममा ठगी – Nepal Press
सलमानको ‘राधे’: स्टारडमको नाममा ठगी
२०७८ जेठ २८ गते १५:०३
कोरोना महामारीका कारण नेपालसँगै भारतको सिनेमा बजार ठप्पप्रायः छ । यद्यपि, विभिन्न माध्यमबाट सिनेमा हेरेर दर्शकले निषेधाज्ञाको समय सदुपयोगसँगै मनोरञ्जन ग्रहण गरिरहेका छन् । यसबीचमा सुपरस्टार सलमान खानको बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘राधे’ रिलिज भयो । उक्त चलचित्रलाई सबै टेलिभिजन सेवा प्रदायकले अतिरिक्त शुल्क लिएर प्रसारण गरे । जसकारण निषेधाज्ञाकै समयमा पनि ‘राधे’ हेर्ने अवसर मिल्यो ।
दर्शकलाई सयौंको संख्यामा फिल्म दिइसकेका सुपरस्टार खानले दिने फिल्मबारे दर्शकको आफ्नै अपेक्षा र अनुमान हुन्छन् । तर, राधेमा उनले दर्शकमाथि खासै न्याय गर्न नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ । कतिपय भारतीय समीक्षकले उनको पछिल्लो दवंग– ३ भन्दा असफल फिल्मको सूचीमा राखेका छन्, राधेलाई ।
सामान्यतया समीक्षकहरुले भन्ने र आमदर्शकले चाहने विषय फरक हुन्छन भन्ने मान्यता राखिन्थ्यो, तर पछिल्लो चरणमा त्यस्तो हुन छाडेको छ, किनभने समीक्षकले केही न केही तारिफ गरेको चलचित्र नै आमदर्शकले रुचाउने गरेको देखिन्छ । त्यसको उदाहरणको रुपमा सलमान खानको बजरंगी भाइजान, सुल्तान आदीलाई लिन सकिन्छ । बजरंगी भाइजानले त भारतीय बक्स अफिसमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् ३०० करोड माथिको कलेक्सनको रेकर्ड राखेको थियो, जसलाई अन्य फिल्मले भेट्टाउन सकेका छैनन् ।
फिल्म राधेलाई कोरियन फिल्म आउटलजको रिमेक भनिएको छ तर आउटलज हेर्न पाइएको छैन, तर उनकै फिल्म वान्टेडको रिमेक जस्तो चाहिँ देखिन्छ । किनभने घटना, संवाद र प्रस्तुतिमा त्यसकै विषयलाई धेरै हदसम्म नक्कल गरिएको छ ।
राधे फिल्मको कथावस्तुमा मुम्बईमा दुई वटा अन्डरवल्र्डले ड्रग्सबाहेकको आफ्नो धन्दा उत्कर्षमा पुर्याएको हुन्छ । अर्को एक अत्यन्तै क्रुर समूहले त्यसमा प्रवेश गर्छ । त्यो समूहको नेतृत्व अत्यन्त राम्रा कलाकारमध्येका एक रणदीप हुँडाले गरेका हुन्छन् । उनले कलेज तथा स्कूलहरुमा ड्रग्सको धन्दा चलाउंछन् । त्यसले गर्दा युवाहरुमा आत्महत्याको दर एक्कासी वढ्छ र यो मुम्बई पुलिसका लागि टाउको दुखाइको विषय हुन्छ ।
यस्तो अपराधलाई सामान्य ढंगवाट तह लगनउज नसकिने निष्कर्षमा पुग्दै विशेष अफिसर सलमान खानलाई प्रवेश गराइन्छ, जसले २९ इन्काउन्टर र १७ सरुवा भोगीसकेका हुन्छन् । वान्टेडमा उनलाई पुलिसको अन्डर कभर अफिसरको रुपमा देखाइएएको छ भने यसमा प्रत्यक्ष तर उनको प्रसिद्ध संवाद ‘मैले जव एकपटक कमिट्मेन्ट गर्छु, त्यसलाई फेरि आफ्नै अनुरोधलाई पनि सुन्दिनँ ।’
यति मात्रै नभइ उनको स्टारडमअन्तर्गत जे–जे बिक्छ, त्यसलाई नै यहाँं बेच्ने प्रयास गरिएको छ । सलमान खानले लगाउने निलो रंगको युं जडित चांदीको ब्रासलेटलाई यहां पटक–पटक देखाइन्छ । र, उनको धेरैजसो फिल्म इदको बेलामा रिलिज हुन्छ, यहाँ पनि उनले सबैलाई इद मुवारक भन्न भ्याउँंछन् ।
राधेमा उनको लकी चार्मको रुपमा रहेका उनका बावु सलिमखानको घर ग्यालक्सी अपार्टमेन्टलाईसमेत देखाइन्छ, जुन फिल्मको परिघटनामा कुनै तालमेल खाँदैन । मोडलिङमार्फत उनको शरीरलाई पनि देखाइएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा उनका सबै बिकाउका चिजलाई फिल्ममा देखाइएको छ । पुलिस डिपार्टमेन्टमा उनको सिनियर अफिसरको रुपमा जेकीस्रोफलाई देखाइएको छ, जसको भूमिकालाई उतिसारो प्रभावकारी ढंगमा प्रसतुत गरिएको छैन । उनलाई एकातफ हिरोइनको दाजुको रुपमा देखाइएको छ, जसको चलचित्रमा केही पनि भूमिका वा प्रभाव छैन ।
सलमान र जेकी श्रोफबीच एउटा यस्तो घिनलाग्दो दृश्य देखाइएको छ, त्यसलाई फिल्मको क्रियटिभ टिमले कसरी हाल्यो ? भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ । किनभने आफ्नी प्रेमिकाको जन्मदिनको पार्टीमा जेकी श्रोफलाई विकिनीमा देखाइन्छ र उनले सलमान खानमाथि समलिंगीले गर्ने हर्कत गर्छन् । यो दृश्यले चलचित्रलाई सबैभन्दा कुरुप वनाएको छ ।
कथावस्तुलाई हेर्दा सलमान एक स्पेशल अफिसरको रुपमा दुईवटा अपराधी समूहलाई मिलाएर रणदीप हँुडाको समूहसंग जुध्ने प्रयास गर्छन्, त्यति मात्र नभइ कलेजका विद्यार्थीहरुलाई इन्फर्मरको रुपमा उनीहरुले चलाउने सामाजिक संजालमार्फत प्रयोग गर्छन्, यसलाई चलचित्रमा देखाइएको केही नयाँपनको रुपमा लिन सकिन्छ ।
अन्त्यमा रणदीप हँुडाको ग्यांङलाई उनले अन्य फिल्ममा भिलेनहरुसंग प्रतिवाद गरेकै शैलीमा समाप्त पार्छन् । यी सबै कथा, घटना तथा शृङ्खलामा कुनै नयाँपन छैन । यो चलचित्रको एक्सन करोडौं खर्च गरिएको हुनुपर्छ तर पनि दर्शकलाई केही नौलो कुराको प्रस्तुति छैन ।
बलिउडले स्थापित गरेको फिल्म चल्ने सुत्र भनेको तीन वटा ‘एस’ हो– स्टारडम, स्टोरी र संग्स । या सुत्रलाई आधार मान्ने हो भने सलमान खानको स्टारडममा प्रश्न गर्ने ठाउं छैन तर फिल्म उनको स्टारडमले मात्रै नचल्ने कुरा त उनका ट्युवलाईट, रेस ३ तथा दवंग ३ ले सावित गरिसकेका छन् ।
स्टोरीको कुरा गर्दा यो चलचित्रमा नयाँपन तथा आममान्छेलाई अपिल गर्ने कुनै कुरा छैन, त्यहीं मुम्बइको घिसिपिटी अन्डरवल्र्डको अपराधको कथा । संगीत अथवा संग्सको कुरा गर्दा यसअघिका सलमानका चलिचत्रहरुका गीतहरु कर्णप्रिय, औसतभन्दा माथि तथा कतिपय चल्तीका आईटम गीतहरु हुने गर्थे ।
फिल्म चलाउनको लागि उनले हिरोइन ज्याकलिन फर्नान्डिसलाई आईटम सङमा राखेका छन् तर किक फिल्ममा उनले ज्यकलिनको म्याक्सीलाई दांतले च्यापेर गरेको नृत्यलाई आइकोनिक दृश्यको रुपमा लिइन्छ । यो फिल्ममा त्यो पनि छैन । कुनै पनि गीतहरु न कर्णप्रिय छन् न त चल्तीका । यसो त यो फिल्मका निर्देशक प्रभु देवाले आफू एक अब्बल दर्जाको कोरियोग्राफर भए पनि निर्देशकीय क्षमतामा त्यसको कुनै झलक छैन ।
विगतमा जस्तै यो फिल्म फ्लप भएकै कारण सलमानले वितरकलाई क्षतिपूर्ती दिन नपरोस् !
प्रकाशित: २०७८ जेठ २८ गते १५:०३